Tag: rsw / us | Martech Zone
Tag: rsw / annaga
Tan iyo markii aan ka shaqeyneyno hay'addeena caawinta shirkadaha tikniyoolajiyadda suuqgeynta, waxaan dhammaanteen ognahay si wanaagsan tijaabooyinka iyo dhibaatooyinka shirkadda warshadaha. Sida wakaaladda dukaamada, waxaan ku leenahay faa'iido taas oo ah inaan si aad ah u xulan karno macaamiisheenna. Dhinaca kale, badiyaa waan halgannaa maxaa yeelay shirkadaha shirkaduhu ma rabaan inay isku dheellitiraan hay'ad kale marka ay ku dhex jiraan suuqgeynta. Waxaan ku raaxeysanay xoogaa xiiso leh macaamiisha caqabadaha ku ah warshadeena. Laakiin dhammaantood